Jekiseni Mould, jekiseni kuumbwa Plastic Mould Maker China
Mould mberi mubvunzo-ERP
Sei sarudza HKY
Automotive kutonhora hurongwa
Product patani gwaro
Umbwa muna 2005, HKY Mould ndechimwe chezvinhu yemakwikwi jekiseni muforoma vanogadzira jekiseni Kuumbwa makambani ari Shenzhen, China. Tinoshumira zvakawanda maindasitiri kusanganisira motokari omukati, motokari kutonhora hurongwa, zvemagetsi, musha zvikumbiro, zvokurapa, simba, maindasitiri uye zvakawanda.
Zvinopa jekiseni muforoma uye jekiseni Kuumbwa mabasa
HKY Mould, imwe kambani jekiseni muforoma Chian, anokupa zvakanaka mhinduro kuti tsika jekiseni kuumbwa zvikamu uye anoumba
Professional China tsika jekiseni muforoma uye Kuumbwa makambani pamwe IATF-16949 advertising uye ERP Kutarisira nehurongwa
Hatifaniri chete kugadzira anoumba uye kuumbwa pagondobwe iwe, asi rinogona zvikamu design, yakanamirwa pamifananidzo, kupenda, nechidzitiro kudhinda uye mamwe mukugadzira chokuita mabasa.
Tiri vakazvipira kuona unhu nokugutsikana makasitoma edu uye kuona kugutsikana.
Unoziva iyo mhinduro
zvinonyatsoenderana renyu neesd
CONTACT HWEDU BASA ROKUITA vapfumi
SARUDZA A KUITA SERVICE
In zvirongwa zhinji, kunze epurasitiki zvikamu, pane chiwanikwa zvikamu, akadai yedu zvakafanana aruminiyamu chiwanikwa, zingi chiwanikwa, titanium chiwanikwa, izvi chiwanikwa zvikamu vanofanirawo kuumbwa. Kuti kupa vatengi basa nani, isu pave nyanzvi vanofa-Kudzingwa ikafa chikwata muna 2015. Zvino, tava akazviunganidzira akapfuma ruzivo kuti zvinodiwa makasitoma vakawanda.
Hatina mberi epurasitiki jekiseni Kuumbwa michina nemakore Zvakaitika jekiseni Kuumbwa indasitiri chikwata, pamwe 2 QC wevanamakanika por kusuduruka. Tinewo kutuma batch mangé ivhu kutanga mutengi rokuongorora. QC anoedza ivhu kuburikidza CMM, purojekita, 2DMI, altimeter, nechigumbuso geji, tsono geji, L-mativi, caliper, micrometer, noukukutu nezvimwewo nekuongororwa. Tumira unhu mishumo vatengi rokuongorora, akadai FAI, SPC, cpk Mumbai, etc. All basa isu kuti ndiyo chete yepamusoro Chinese tsika jekiseni Kuumbwa.
HKY Mould ane ruzivo rwakakura pane kaviri ruvara jekiseni anoumba pamwe kutenderera hurongwa, izvo rinobvumira yakarurama kusarudzwa chigadzirwa mhando uye gedhi nzvimbo, zvichiita kubatana maviri mavara nyore uye yakarurama. Uyezve, maererano mutengi zvinodiwa, tinogona kupa yechipiri rabha Kuumbwa basa.
A tsime yakagadzirwa uye zvakarurama kugadzirwa chakuvhuvhu ndiyo kiyi vakarongeka kugadzirwa epurasitiki zvakanaka zvikamu. HKY chikwata ane mupfumi zvakaitika musi nemazvo chakuvhuvhu pamasikiro, kugadzira kubva pamakore ose aya nokudzidza, hunoita kuti tikwanise kushumira vatengi edu anoumba chivakwa zvikamu kuti zvakaoma kunzwisisa uye zvakasimba miganhu zvinodiwa.
View mabasa edu
NEI SARUDZA HKY Mould
√ With isu, unogona kuponesa nguva uye mari. Tiri fekitari, kushanda nesu tisawira muzvinashawo komisheni
√ ouinjiniya chikwata chedu ane zvakawanda indasitiri ruzivo uye chirongwa zvakanaka unyanzvi, uyewo zvakanaka hwokugadzira Chirungu uye akarongeka kutaurirana.
√ Fully kusangana yenyu zvinodiwa quality, zvose Foroma zvinoumba kuti ekisipoti anoumba anogadzirwa maererano DME, HASCO mitemo, yakadai somutungamiri nembambo, bushings, thimbles kana maererano vatengi zvinodiwa.
√ Sign asiri kunoutsvene chibvumirano (Non-Kubuda pachena Agreement) gwaro kudzivirira kwenyu chirongwa mashoko uye hatizombofi kuudza mashoko ako mamwe bato rechitatu.
√ DFM (magadzirirwo manufacturability) Kuongororwa mumwe mugove uye kuziva zvinogona nyaya njodzi (chikamu magadzirirwo chakuvhuvhu matambudziko) asati riumbe magadzirirwo kugadzira
√ Maererano mutengi wacho 2D vanodhirowa, anoumba vose pamwe chete simbi tsamba, kupisa kurapwa advertising, chakuvhuvhu bvunzo parameters uye renguva pamwero chipimo mushumo.
√ Tine makore ruzivo pamusoro 20 pamusoro chakuvhuvhu design, jekiseni muforoma kugadzira, Two-mavara muforoma, Die tichiwisira, jekiseni Kuumbwa Manufacturing
√ Gara inofambiswa kuti vatengi vedu nenguva nenzira uye kukurukura nokukurumidza dzeko bhizimisi
√ yave pamwe vatengi zhinji pamusoro jekiseni muforoma chirongwa, izvo kugara akasiyana maindasitiri akafanana Automotive, Aerospace, Machinery, Appliance, Electronics, Packaging, Machinery, etc.
Address Room # 102, Building # 50, Shu Tianpu Xin Xing Industry Zone B, Matian Street, Guang Ming District, Shen Zhen guta, Guang Dong Province, China, 518101
Please siya kane mashoko kana paine Custom jekiseni Mould, jekiseni pakuumba Kuita zvirongwa vanofanira kuti watambotaura, mumiririri wedu kutaura kwamuri panguva yakakodzera.
Plastic Injection Moulding Components, Plastic Mould jekiseni, Plastic Injection Bottle Cap Mold, Mold For Plastic Injection,